प्रदेश १ : आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ ।
प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको हो । उहाँले आगामी वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता प्रदान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मुल नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोजना तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण पाठ
नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि संघीय प्रणाली लागू भएर प्रदेश सरकार गठन भई योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको तीन वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रदेश नं. १ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामहरु उपलब्ध साधन स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गरि गरिरहेको छ । यतिबेला नयाँ भेरिन्यट सहितको कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि प्रदेश सरकारद्वारा कार्ययोजनाका साथ आवश्यक संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेका छन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान दृष्टि यसैमा केन्द्रीत रहेको छ ।
मुलतः अहिले हामी कोभिड-१९ महामारीसँग जुधिरहेका छौं । यो महामारीले स्थापित स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचना समक्ष अकल्पनीय चुनौती थपेको छ । विश्वव्यापी रूपमा आजसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धान, खोज र आविष्कारमा कोभिडले नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । यस अवधिमा स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचना सुधारमा थप प्रगति भएका छन् । अहिले ब्ल्याक-फङ्गस नयाँ सङ्क्रमणकारी रोगको रूपमा देखा परेको छ । कोभिडको नँया भेरिएन्टको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको एकीकृत सबलीकरण, अनुसन्धान र व्यापक जनचेतना सहित खोप लगायत अन्य उपायद्वारा महामारीको सामना गर्नु एकमात्र उपाय रहेको छ ।
कोभिड विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीहरुको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश‘ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यस अन्तर्गत प्रदेश सरकारले पालिकाहरुको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय निकायका अस्पताल एवम् स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमाअनलाइन दर्ता गर्नेब्यवस्थामिलाइनेछ । डिजिटल साक्षर नभइसकेका गाउँ तथा टोलहरुका लागि स्थानीय वडाहरुलाई कृयाशील बनाइने छ । साथै इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ पद्धति विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको शुरुवात गरिने छ ।
“गुणस्तरीयस्वास्थ्यसेवाप्रदेशसरकारकोप्रतिबद्वता” भन्ने मुल नारासहित प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोजना तयार गरीअक्सिजन प्लान्ट,सघन उपचारकक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरणर भौतिक पूर्वाधारसहित मेची अस्पताललाई २०० शैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई१००/ १०० शैया र अन्यजिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गरिनेछ । विपन्न तथा गरीव वर्ग र असहायहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि एक उपचारकोषको स्थापना गरिनेछ।
“आमाको गर्भ सुरक्षित हुँदा एउटा युग सुरक्षित हुन्छ“ भन्ने नाराका साथ प्रदेश सरकारको अनुदानमा पूर्ण तयारी पौष्टिक आहार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
बाल विकास केन्द्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ । प्रारम्भिक कक्षा देखि नै त्रिभाषिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ ।
विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । पछाडि परेका वर्ग र समुदायका जेहनदार विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ । विद्यालय नर्सिंङ कार्यक्रम अन्तर्गत विधार्थीदेखि अभिभावकसम्म कार्यक्रम लागु गरी स्वास्थ्य प्रर्बदनमा जोड दिइनेछ। साथै महिलामा देखिने प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरु, आङखस्ने, पाठेघर क्यान्सर स्तनक्यान्सरको रोकथाम तथा उपचारको व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गरिनेछ।
छुवाछुतमुक्त प्रदेश कार्यन्वयन अभियान संचालन गरिनेछ।
प्रदेशसरकार, स्थानीयतह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
युवाहरुमा स्वरोजगारका अवसरहरु सृजना गरी आत्मनिर्भर बनाउन एवम् वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न “मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम“ लाई स्थानीय तह एवम्अन्य विकास साझेदारहरूको समन्वय र सहकार्यमा स्पष्ट मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथमा एक चक्रिय कोष समेत खडा गरी संचालन गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्थान विशेषको सम्भाव्यता तथा कृषकको मागमा आधारित स्थानीय तह लक्षित व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
चिया, अलैँची, अदुवा, सुपारी, अम्लिसो, चिराइतो, रुद्राक्ष लगायत बहुमूल्य बनस्पतिजन्य उत्पादनको लिलामी बजार व्यवस्थित गर्नुका साथै गुणस्तर अभिवृद्धिको प्रबन्ध गरिनेछ ।
प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र वहुवर्षीय सडक, प्रदेश गौरवको सडक र विशेष सडक अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिनेछ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
बहुवर्षीय सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश १ सरकारले सुरक्षित रुपमा आवागमन, बजार अवसरहरू र सेवाहरूमा पहुँचका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । यस सम्बन्धमा प्रदेशमा स्थानीय तहहरुलाई झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईने प्रबन्ध गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक लठ्ठा भण्डारण र वितरणको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
लगानी प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाइएका परियोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गराउन प्रारम्भिक एवम् बिस्तृत अध्ययनका साथ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ । आयोजनाहरुलाई अगाडिबढाउन निजी तथा वैदेशिक लगानी आर्कषित गरिनेछ । परियोजना कार्यन्वयन तथा अनुगमन इकाई गठन गरिने छ । साथै लगानी बोर्ड र प्रदेश लगानी प्राधिकरणबिच सम्बन्ध कायम गरी लगानी प्राधिकरणका परियोजनाहरुलाई बास्केट परियोजनाका रुपमा राख्न समन्वय गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड महामारी विरुद्धको पुनःउत्थान सहितको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मूल कर्तव्य र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ ।उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही प्रदेश सरकारले अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यहोरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउँदछु । प्रदेशले परिकल्पना गरेको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मार्गचित्रलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात गरेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारले सवै क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरुबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास राखेको छ । प्रदेशको विकास प्रयास तथा कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा प्राप्त सहयोग तथा सद्भाव प्रति सम्पुणर्मा पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
बिहिबार, २७ जेठ, २०७८, रातीको ०८:१३ बजे